အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ စားသုံးသူအသိပညာရေး နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲ ပါဝင်တက်ရောက် – Myanmar Consumers Union (MCU)
အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ စားသုံးသူအသိပညာရေး နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲ ပါဝင်တက်ရောက်
06-19-2019 | ရေးသားသူ admin | မှတ်ချက်မရှိပါ
မြန်မာစားသုံသူများသမဂ္ဂသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရုံး၌ ဂျာမန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏ အကူအညီဖြင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန နှင့် မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော အစားအသောက် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ စားသုံးသူအသိပညာရေး နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Ms Alice Pham. GIZ Consultant, ဂျာမန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဖနွမ်းပင်ဒေသတွင် နိုင်ငံတကာစားသုံးသူများအဖွဲ့နှင့် မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂတို့
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Snapshots from the MCU/Consumers International Survey ၏ တွေ့ရှိချက်များ၊ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါပွဲသို့ မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂမှ ဥက္ကဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မာမာကြည်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၁ ဒေါက်တာ မိုမိုတင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်နိုင်မင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစားအသောက် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မွနျမာစားသုံသူမြားသမဂ်ဂသညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ (၁၈)ရကျနတှေ့ငျ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရုံး၌ ဂြာမနျအပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အဂေငျြစီ၏ အကူအညီဖွငျ့ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန နှငျ့ မွနျမာစားသုံးသူမြားသမဂ်ဂတို့ ပူးပေါငျးကငျြးပသော အစားအသောကျ စံခြိနျစံညှနျးဆိုငျရာ စားသုံးသူအသိပညာရေး နှီးနှောဆှေးနှေးပှဲ အစညျးအဝေးသို့ ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွပါသညျ။
Ms Alice Pham. GIZ Consultant, ဂြာမနျအပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အဂေငျြစီ၏ ထောကျပံ့မှုဖွငျ့ ဖနှမျးပငျဒသေတှငျ နိုငျငံတကာစားသုံးသူမြားအဖှဲ့နှငျ့ မွနျမာစားသုံးသူမြားသမဂ်ဂတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသော Snapshots from the MCU/Consumers International Survey ၏ တှရှေိ့ခကျြမြား၊ ခွုံငုံသုံးသပျခကျြမြားကို ရှငျးလငျးတငျပွခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါပှဲသို့ မွနျမာစားသုံးသူမြားသမဂ်ဂမှ ဥက်ကဌ ပါမောက်ခ ဒေါကျတာ မာမာကွညျ၊ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး-၁ ဒေါကျတာ မိုမိုတငျနှငျ့ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးအောငျနိုငျမငျးတို့ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး အစားအသောကျ စံခြိနျစံညှနျးမြား၊ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးနှငျ့ စားသုံးသူကာကှယျရေးရှလေု့ပျငနျးစဉျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါသညျ။
Consumer protection, Discussion, meeting
ရှေ့ပို့စ် မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂနှင့် MILS အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နောက်ပို့စ် မြန်မာ့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာ တင်ပြမိတ်ဆက်ပွဲသို့တက်ရောက်
Visit Count 1428554